Thwebula CM Security 3.1.3.1048 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: CM Security
CM Security – unqulo wesi arab kuphela onamandla umsebenzi ukuvikelwa ngesikhathi sangempela. CM Security kuthola futhi ususa amagciwane, ama-worms, trojans, spyware, izinsongo ezehlukene njll software wenza scan egcwele ezintsha amafayela, izicelo, updates, amawebhusayithi izinsongo kungenzeka. CM Security isekela zokuphepha kwesistimu multi-level okusekelwe esikabili-izakhiwo kanye ifu-based unqulo wesi arab engine. Isofthiwe futhi ikuvumela ukuba balahle udoti okweqile, ukuvimba izingcingo engadingeki silungise inkinga kwemfihlo.
Ukuvikelwa ngesikhathi sangempela
Scan system Full nokususwa izinsongo
Block of the izingcingo okungafunwa
Thwebula CM Security
Amazwana ku CM Security
CM Security software ehlobene
I-Avast Mobile Security – i-antivirus ephelele yokuvikela uhlelo ekulweni namagciwane kanye ne-malware. Futhi, isekela izindlela ezahlukahlukene zokusebenza ukuhlonza izinkinga zohlelo futhi inikeze nokuvikelwa ezingozini zenethiwekhi.
Ukuphepha okungu-360 – isoftware yokuvikela idivaysi maqondana nama-virus namamojula amabi, ihlanza uhlelo, iphathe izinhlelo bese isindisa amandla ebhethri.
I-Avira Antivirus Security – i-antivirus yokuvikela uhlelo lwedivayisi ekulweni namagciwane nezinye izinsongo. Futhi uma kunesidingo kusekela ukhiye wedivayisi okude nezingcingo ezingenayo noma i-SMS.
I-Blokker – ukuvikela okusebenzayo kwedatha yedivayisi ekusetshenzisweni kwabantu abangagunyaziwe. Isoftware ivimba ukuqala kwezicelo nezinsizakalo ezikhethiwe.
I-AppLock – isoftware yokukhiya izinhlelo zokusebenza, igalari, ukuxhumana kwe-inthanethi, imenyu yezilungiselelo, uhlu loxhumana naye noma amanye amafayela anephasiwedi.
I-4shared – ithuluzi lokuthola kanye nokuphatha imininingwane yensiza ye-4shared. Isoftware ikuvumela ukuthi ufinyelele kwi-akhawunti yakho futhi udlale amafayela wemidiya.